एमसीसी पारित गर्न देउवा र ओलीबीच भद्र सहमति ! • raradiodarpan.com
एमसीसी पारित गर्न देउवा र ओलीबीच भद्र सहमति !
सबैभन्दा बढी नेकपा माओवादी केन्द्रमा एमसीसी पारित गर्नेबारे सहमति जुटाउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’लाई सकस परेको छ। अमेरिकाले जनवरीसम्म एमसीसीबारे निर्णय लिन आग्रह गरेबमोजिम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पाँच दलीय गठबन्धन बैठकमा ‘एमसीसी पास गरौं’ भन्ने प्रस्ताव राखेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावपछि गठबन्धन दलहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। जनवरीभित्र एमसीसीबारे नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई सहमति जुटाउन अमेरिकाले समय दिएको थियो। राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम भए फेब्रुअरीभित्र संसदबाट अनुमोदन गरी एमसीसी कार्यान्वयनमा लैजाने अमेरिकीको तयारी छ। अमेरिकाले सोही कुरा प्रधानमन्त्रीदेखि सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरुलाई भनिसकेको छ।
एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि एमसीसीबारे नकरात्मक छैनन्। गठबन्धनबीच एमसीसीबारे सहमति जुट्ने अवस्था आए माधव नेपाल त्यसमा बाधक नबन्ने मनस्थितिमा छन्। अमेरिकीहरुसँग नेता नेपालको सम्बन्ध अविश्वासिलो छैन। सो पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल एमसीसी पास गर्न नहुने अडानमा छन्।
एकीकृत माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा, सभामुख अग्नि सापकोटा, लिलामणि पोखरेललगायतका केही नेताहरु एमसीसी पारित गर्नेबारे कुरै सुन्न चाँहदैनन्। माओवादीका अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसमेत सोही धारमा छन्।
गत नोभेम्बरमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु र सेप्टेम्बरमा एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपालका आएका थिए। नेपालमा उनीहरुले प्रधानमन्त्री देउवासहित प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटेर एमसीसी पारित गर्न आग्रह गरेका थिए।
अन्नपूर्णपोस्ट मा खबर छ